साइवर अपराध र सञ्चारमाध्यम बिषयक अन्तक्र्रिया सम्पन्न
काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजनामा साइवर अपराध र सञ्चारमाध्यम बिषयक अन्तक्र्रिया सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले विश्वका अन्य देशका तुलनामा ...
कांग्रेस उम्मेदवारसँग दुखेसो ‘खोई एमालेको बृद्ध भत्ता ?’
दाङ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा घोराही उपमहानगरपालिका–२ साईपुरका ८१ बर्षिय टिकाराम पोख्रेललाई आश देखाईयो ‘हामीलाई जिताउनुस् घरमै बृद्ध भत्ता पुर्याईदिन्छौँ ।’ सधै बृद्धभत्ताका लागि गाविस कार्यालय धाईरहन...
राष्ट्रियता र स्वाधिनताको रक्षाका लागि वाम गठबन्धन : महासचिव पोखरेल
काठमाडौँ, कात्तिक २४ । नेकपा (एमाले) का महासचिव ईश्वर पोखरेलले मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधिनताको रक्षाका लागि वाम गठबन्धन भएको बताएका छन् । टोखा नगरापालिका–५ धापासीमा आयोजना गरिएको भेलामा उहाँले देशम...
वाम गठबन्धन र काँग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप
सोलुखुम्बु । सोताङमा वाम गठबन्धन र नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ । आज भएको झडपमा वाम गठबन्धनका घनश्याम नेपाली र काँग्रेसका जिल्ला कोषाध्यक्ष पेमा तामाङ घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । घाइ...
पूर्व गृहमन्त्री शर्माको गाडीमा बम प्रहार, विप्लवका कार्यकर्ता संलग्न रहेको आशंका
रुकुम । पूर्व गृहमन्त्री तथा प्रतिनिधसभा सदस्यका उम्मेदवार जनार्दन शर्मा चढेको गाडीलाई लक्षित गरी पश्चिम रुकुममा दुई वटा बम प्रहार भएको छ । चोरजहारी उपत्यकाको चुनावीसभाबाट घरदैलो गरेर फर्कदै गरेका श...
किन अड्किए हजारौं कन्टेनर भारतको कोलकत्ता बन्दरगाहमा ?
काठमाडौं । नेपालका लागि सामान लोड गरिएका करिब एक हजार कन्टेनर भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा अलपत्र छन् । आयातसँगै बढेको कन्टेनरको चाप व्यवस्थापन नहुँदा कन्टेनर अड्किएका हुन् । यसप्रति कोलकाता बन्दरगाह व्य...
क्षेप्यास्त्र आक्रमणप्रति नेपालको निन्दा
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले साउदी अरेबियाको रियाद विमानस्थलमा बुधबार गरिएको क्षेप्यास्त्र आक्रमणबाट दुःखित भएको जनाउँदै त्यसलाई ‘समवेदनाहीन’ भनेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी उक्त...
योजनासहित आश्वासन बाँड्दै उम्मेदवार
बेनी, म्याग्दी । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको माहोलले गाउँबस्तीमा रौनक थपिएको छ । मुलुकका ३२ जिल्लामा पहिलो चरणमा आगामी मंसिर १० गते हुने निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा म्याग्दीका उम्मेदवार र राजनीति...
एमाले र प्रजापरिषद् पार्टीबिच एकीकरण
काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाल प्रजापरिषद् पार्टीबिच एकीकरण भएको छ । बिहीबार चावहिलमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले र परिषद्बिच पार्टी एकीकरण गरिएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारी...
काठमाडौँ । भविष्यसम्मका लागि राम्रो हुने भन्दै स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडले रियल मड्रिडका स्टार स्ट्राइकर क्रिष्टियानो रोनाल्डोको स्थानमा नेइमार चाहेको खबर सार्वजनिक भएको छ । भविष्यमा रोनाल्डोको स्थान...
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दिएका दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनाव चिह्न मात्रै समेटेर आगामी प्रतिनिधिसभाको मतपत्र बनाएको छ । आयोगको यो कार्यले प्रतिनिधिसभातर्फको मतपत्र निकै छोटो र छरितो...
निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आय दिनुपर्छ : राज्यमन्त्री लामा
जुम्ला । उद्योग राज्यमन्त्री रेशमबहादुर लामाले समाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका लागि निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आय दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । सन्ध्या फाउण्डेशन नेपालको प्रथम साधारण सभाको उद्घ...
इलाम,कात्तिक २२ । फाकफोकथुम गाउँपालिका–१, ठिंगेपुर निवासी २८ बर्षीय अर्जुन लिम्बूको वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा मृत्यु भएको छ । मलेसियास्थित जोहोर बारु बातुपहाड शहरस्थित एक फर्निचर कम्पनीमा...
एमाले र माओवादीले कांग्रेसलाई प्रश्न गरे दलहरु मिल्दा अधिनायकवाद, झगडा गर्दा लोकतन्त्र हुन्छ ?
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुई पार्टीको एकताबाट हतास नबन्न कांग्रेसलाई सुझाव दिएका छन् । मंगलवार संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै ओली र दाहालल...
पलले बनाए आफ्नी सपनाकी परी आँचललाई
काठमाडौं । नायक पल शाह र नायिका आँचल शर्मा पछिल्लो समय नेपाली रजतपटमा निकै जमेको जोडी हो । चलचित्रमा मात्रै होइन म्युजिक भिडियोमा पनि उनीहरूको जोडी निकै जमिरहेको छ । यही जोडीले मोडलिङ गरेको नयाँ म्...
उपप्रम गच्छदारलाई शोक
इटहरी । उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारलाई पारिवारिक शोक परेको छ । उनका ७८ वर्षीय दाजु दीपनारायणको आफ्नै घर दुहवी–२ पचिरामा आज मृत्यु भएको हो । प्रजातन्त्रवादी योद्धा द...
वाम गठबन्धनले मात्र मुलुकमा समृद्धि ल्याउँछ : नेम्वाङ
इलाम । नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले वाम गठबन्धनले मात्र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने बताएका छन् । आज फाकफोकथुम गाउँपालिका–४ फूएतप्पामा आयोजित वाम कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै नेम्वाङले ...